ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့် လွတ်လာပြီ — မြန်မာဌာန
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ ၂ဝ၁၂ ခု ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့် သတင်းထောက်များနှင့် စကားပြောနေစဉ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်က... သူတစ်ချိန်က ချမှတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံ ၇ ဆင့် ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုနဲ့အတူ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်အကြာမှာ ကေအန်ယူ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲနိုင်မှုတွေဟာ အင်မတန် ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ သူ့အနေနဲ့ အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရစဉ်မှာ ပြည်တွင်းထုတ်ဂျာနယ်တွေ ဖတ်ရှုသလို အာအက်ဖ်အေ အပါအဝင် ပြည်ပ သတင်းဌာနတွေက ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုလည်း နားထောင်တယ်လို့ သတင်းထောက်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ကို အမိန့်မနာခံမှုနဲ့ ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်မှာ ဆိုင်းငံ့ထောင်ဒဏ် ၄၄ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇနီး ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ၊ သားအကြီး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်နိုင်ဦး၊ သားအငယ် ဒေါက်တာရဲနိုင်ဝင်း၊ သမီး မသင်းလဲ့လဲဝင်းနဲ့ သမက် ဦးတင်ထွတ် တို့လည်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး ရာနဲ့ချီတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အခုလို ဦးခင်ညွန့်နဲ့ သားသမီးတွေ လွတ်မြောက်လာပေမယ့် သမက်ဦးတင်ထွတ်က မလွတ်မြောက်သေးကြောင်း၊ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ တစ်ရာကျော်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပေမယ့် ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းထွန်းနဲ့ တခြား တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတချို့ကိုတော့ လွှတ်ပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ရဲ့ မိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို အာအက်ဖ်အေ အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင် စုစည်းတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ပြန်လွတ်လာသူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သူ စီးပွားရေးသုတေသီ ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)ကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ZAW ZAW,REMARK is VERY GOOD.We also same for poples and sudents.
Khin Nyunt has successfully and carefully portrayed his image asabetter army-man than anyone else till this house-arrest- release date. But he finally knee- downs to the sins what he had done and irresponsibly run away from burma politics , saying as if he has got dhamma . He portrayed himself cunningly as if he lets younger talents to upstage and says some good on DASSK. It is he who gaveaspeech in our Government staff's welcome party in Phaung-Gyi condemning DASSK's personal life . Whatashame an army strong man gave up politics after7yrs of his grandeur house-arrest . The Lady ,DASSK more thanadecade in so lonesome house-arrest is still more stronger about country and politics. Prominent Student leaders come out of terrible jails still with full hopes and energy for future country. This is the history that tells who is the genuine one!
ခင္ညြန့္လြတ္လာတာ ၀မ္းမသာပါဘူး၊ သူ့ေျကာင့္ဒူတ္ခေရာက္ရသူေတြ သူသတ္လို့ေသခဲ့တ့ဲေက်ာင္းသားေတြအမ်ားျကီးပါ။ အန္တီစု ကိုလဲ ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္းေျပာထားတာေတြ ျပန္သတိယေစတယ္။စစ္တပ္က မေကာင္းတာလုတ္တဲ့သူေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာစစ္ေဆးသင့္တယ္